War Deg Deg Ah: Mujaahid Cali Guray Oo Ka Waramay Cida U Qalmata Golaha Wakiilada Jsl - Wargane News
Home Somali News War Deg Deg Ah: Mujaahid Cali Guray Oo Ka Waramay Cida U...
KUMA AYAA LA FILAYAA IN UU NOQDO GUDOOMIYAHA CUSUB EE WAKIILADU?
Sedex bilood ka hor doorashada inu xilka ka dego Gudoomiyaha Wakiilada Mudane C/abdiraxmaan Cirro isaga ayay dantiisa tahay. Balse yuu doonayaa inay uga dambayo miyuuse ku guulaysan karaa in ninka dhaxlayaana uu noqdo ka isagu uu doonayo? Hadii Kulmiye iyo Xukuumaddiisu aanay isugu guurin hal musharax oo keliya oo la tartama Xildhibaan Cabdiraxmaan Talyanle oo ka tirsan xisbiga Waddani oo keliya ayuu Cirro ugu dhawaan karaa inay tiisu suurtogal noqto. Hadiise Kulmiye iyo xukuumaddu musharax keliya isugu guuraan Talyanle fursad ma laha ee musharaxa Kulmiye ayaa ku guulaysanaya. Taasina waxay u baahan tahay in la qanciyo Xildhibaan Saleebaan Koore waayo Gudoomiye- xigeen xisbigiisa ah ayaa fadhiya oo laga yaabaa hadii uu u tanaasule waxa midoobaya labadii dhinac ee kala taageersanaa taasina waxay albaabka ka soo xidhaysaa in musharaxa Waddani Mudane Talyanle uu helo fursad uu ku guulaysan karo.
Hadii ay xisbinimadu shaqayso Kulmiye wuxu haystaa in ka badan 2/3 tirada xildhibaanada Wakiilada markaa musharaxooda cid u babac dhigi kartaa ma jirto. Sidaa daraadeed waxan saadaalinayaa in gudoomiyaha cusub ee aqalka wakiiladu uu noqon doono Gudooniye/xigeenka koobaad Mudane Baashe. Markaa kulmiye wuxu faaiiday hogaamintii Aqalka Wakiilada oo uu ka dhaxlay Waddani oo lumiyay.
Mujaahid Cali Guray.